Igbo, John: Lesson 103 - Jizọs rịọrọ arịrịọ maka ndịozi ya (Jọn 17:6-19) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 103 (Jesus intercedes for his apostles)
E - MMALITE EKPERE EKPERE JIZOS (Jọn 17:1-26)
3. Jizọs rịọrọ arịrịọ maka ndịozi ya (Jọn 17:6-19)
14 Mu onwem enyewo ha okwu-gi. Uwa nākpọ ha asì, n'ihi na ha esiteghi n'uwa, dika Mu onwem nesiteghi n'uwa.
Jizos gbara aka n'ekpere ya na o nyere ihe ndi Nna ya gwara ndi neso uzo ya, n'igosi ha aha nna ya na ihe o bu. Site na nkpughe a, o kwuputara na Atọ n'Ime Otu dị nsọ nye anyị. Ngosipụta a dị ebube banyere ihe gbasara Chineke metụrụ ndị na-eso ụzọ ya aka; ọ gbanwere ha, jupụta ha n'ike ka ha wee ghọọ akụkụ nke ahụ ime mmụọ Kraịst.
N'ihi àgwà ndị a na omume ọma ụwa ga-akpọ ha asị, ebe ha kpọrọ Jizọs asị. Dị nnọọ ka isi iyi nke Kraịst si n'aka Chineke, na ndụ ya zoro n'ime Chineke site na mgbe ebighi ebi, n'otu aka ahụ, ndị niile a mụrụ ga-adị ndụ ruo mgbe ebighi ebi.
15 Ekpeghi m ekpere ka i wepu ha n'uwa, kama ka i we debe ha n'aka ajọ onye ahu.
Jizọs ebughị ndị na-eso ụzọ ya n'eluigwe, ọ bụghịkwa na-ebuga ha na nzuzo, ọ bụ ezie na nhụjuanya na ihe isi ike na-agba ha gburugburu. Ọ gwara Nna ya ka o chebe ụmụazụ ya pụọ ​​na mmetụta Setan na nduhie nke ndị nkatọ na mmụọ ọjọọ. Onyenwe anyị na-arịọchitere anyị ekpere. Onye kwere ekwe ọ bụla na-ebi ndụ na-akwado ya ma kaa ya akara. Ọbara Jizọs na-echebe anyị, nakwa n'ihi àjà ya, Chineke nọnyeere anyị. Ọ dịghị onye ga-ebo anyị ebubo ma ọ bụ bibie anyị. Anyị aghọwo ndị ezi omume, ndị na-adịghị anwụ anwụ, ndị amara nke Onye Nsọ ahụ kwadoro. Ọ gwụla ma anyị ga-enupụrụ nnupụisi ma soro ọchịchọ anyị maka mmehie ụfọdụ; mgbe ahụ Ọ ga-ekwe ka anyị daba n'ọnwụnwa, n'ihi na mmehie ahụ nke bi n'ime anyị nwere ike ịpụta ma wepụ ihere. Mgbe ahụ, anyị ga-ama jijiji ma chegharịa site na anya mmiri, na-eti mkpu, "Nna, edu anyị baa n'ime ọnwụnwa, kama napụta anyị n'aka ọjọọ." Onye na-agbasi mbọ ike ka ya na Setan na ọnwụ na ike ya n'ike na nkwuwa okwu mmadụ na-eduhie onwe ya. Na-abata n'ọbara Kraịst na ịrịọ arịrịọ, ọ bụ naanị Onye nzọpụta anyị.
16 Ha esiteghi n'uwa dika Mu onwem nēsiteghi n'uwa. 17 Jiri eziokwu gị doo ha nsọ. Okwu gị bụ eziokwu.
N'ekpere ya, Jizọs kwughachiri ndị na - eso ụzọ ya àmà ọ bụ ezie na ha apụtaghị n'ụwa ọjọọ a ebe ọ bụ na ha sitere n'anụ ahụ ma bụrụ ihe ọjọọ dị ka ndị ọzọ. Ha ga-anọgide na-adị njọ, ma maka amara Chineke. Ọbara Kraịst napụtara ha n'ụlọ mkpọrọ nke Onye Ọjọọ. Ha aghọwo ndị ọbịa na ụwa a na ụmụ amaala nke eluigwe.
N'ime ọdịdị ọhụrụ ha nke mejupụtara ma ahụ ma mkpụrụ obi ga-enwe ọgụ na-aga n'ihu. Mmụọ Nsọ na-ewute ma ọ bụrụ na anyị hụrụ onwe anyị, ọrụ anyị na ezinụlọ anyị karịa ndị ọzọ. Mgbalị niile ị na-eme iji mee onwe anyị obi ụtọ ga-emerụ akọnuche anyị.
Ụgha ọ bụla na-agbanye n'ime ebe nchekwa dịka ụgbụ ọkụ. Mmụọ nke Chineke agaghị ekwe ka ị na-eburu ihe onwunwe zuru ezu n'ụlọ gị. Ọ bụrụ na i mejọọ onye site na mkparị ma ọ bụ omume ọjọọ, Mmụọ nke eziokwu ga-akpali gị ịga ma rịọ ya mgbaghara. Mmụọ Nsọ na-ekpuchi ajọ omume nile, aghụghọ na ntụgharị na ndụ gị, ọ ga-ekpe gị ikpe dịka ya.
Kraist gwara Nna ya ka o doo anyị nsọ, n'ihi na ndị na-adịghị ọcha enweghị ike ime nsọ ọzọ. A na-emetụta ịdị nsọ a site n'ịdọta anyị na eziokwu Ya. Ruo n'ókè anyị na-amata ịhụnanya Chineke ma nọgide n'amara Ọkpara ahụ ma na-ebi n'ike nke Mmụọ Nsọ, a na-edo anyị nsọ. Ọnụnọ Chineke na ndụ anyị na-emetụta anyị. Chineke n'onwe ya na-emezu nzube Ya n'ime anyị, "Dị nsọ n'ihi na abụ m Onye Nsọ." Ọbara Jizọs ji doo anyị nsọ otu ugboro, dịka Mmụọ Nsọ dị n'ime anyị enweghị ihe ọ bụla. Okwukwe gị n'ihe dị nsọ nke Atọ n'Ime Otu na-edo gị kpamkpam.
A na-enweta ido nsọ a site n'aka Chineke site na ntinye anyị n'okwu Ya. Oziọma ahụ bụ isi iyi nke nsacha anyị, na mgbọrọgwụ nrubeisi anyị. Okwu Kraist na-eduga anyị n'inwe okwukwe, na ịjụ onwe anyị na ịhụnanya maka ofufe ka anyị wee nwee ike ịbịaru Chineke nso. Meghee obi gi n'okwu nke Nna gi, n'ihi na Chineke bu ih u n'anya, onye obula nke nogide na ihu-n'anya nogide n'ime Chineke, Chineke na ya.
18 Dị ka i zitere m n'ụwa, ọbụna otú ahụ ka m si zite ha n'ụwa.
Mgbe Jizos kpesiri ekpere maka ndi náeso zoya kao bruha nso nso, o zitere ha ka ha baa nime ụwa nke ajo omume. Ọ zọpụtara anyị ka anyị doo ndụ anyị nsọ; mgbe ahụ o zitere anyị n'ime ụwa ka o site n'aka anyị nwee ike ịzọpụta ma dozie ọtụtụ. Nzuki Kraist ab ghi nzuki ah nke náadiri obi, náeme onwe ya obi ụtọ na okwu di egwù na ikpé nke iwu; Ọ bụ mmekọrịta nke ime ihe, na-awakpo ebe siri ike nke Setan site n'okwukwe, site n'ekpere na nnọgidesi ike na ntụgharị nke ndị furu efu. Chọọchị na-akpọsa Alaeze Nna ahụ ma na-achọ imetụta uche Ya maka ozi ọma n'ụwa. Ị marala n'ekpere Kraịst maka ime ihe n'ịkwusa ozi ọma?
Jizọs na-asọpụrụ gị ma zitere gị ndị furu efu dịka Nna zitere ya. Nzube a bu nani otu, ya bu ihe ndi ahu iji mezuo ihe a: okwu ya banyere eziokwu nke Chineke nime Kraist. Jizọs kpọrọ gị ka ị rụọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, ọ bụghị ịdị umengwụ na ihe efu. Mmụọ Nsọ ya bụ ike gị.
19 N'ihi ha ka Mu onwem nēdo Onwem nsọ, ka ewe do kwa ha onwe-ha nsọ n'ezi-okwu.
Jizọs maara na ọ dịghị onye n'ime ndị na - eso ụzọ ya nwere ike ikwusa ozi ọma ma ọ bụ mezuo ọdịmma ime mmụọ, kama na ha nile ga - ada na ọnyá na - egbu ha n'obi ha na akọnuche ha, ma ọ bụrụ na Chineke agaghị eji ịdị nsọ ya na ike Ya gbara ha gburugburu. N'ihi nke a, Ọkpara ahụ ghọrọ onye aja, na-edo onwe ya nsọ, ọ bụ ezie na ọ dịla nsọ n'oge niile. Site n'onwu ya, o zutere ihe nile achoro nke idinso, nke mere nao gaeme ka ebubo Setan bia site n'okwukwe anyi nime obara Kraist. Site na onwu nke onwu ya, ndi neso uzo ahu nwere ike inweta Mo Nso. E meziri ha ka ha buru mmiri dị ndụ; ndị àmà Jizọs banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya.
N'ihi ya, a gbahapụrụ ha, egbugbere ọnụ ha na-ehichapụkwa site n'echiche aghụghọ. Ha natara nkwuwa okwu ka ha ghara ịgọnahụ ikike na ikpughe mmehie ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịkpata akọnuche echefuru kama nke ga-emecha nweta nzọpụta. Esemokwu a megide ụgha, omume rụrụ arụ na mpako na-enweta nanị nchebe nke ọbara Kraịst na ịdị irè nke ịrịọchite ọnụ ya.
EKPERE: Gbaghara ịkpọasị, ụgha na mpako n'obi anyị. Anyi bu ihe ojo ojoo, i di nso. Zere anyị ọnyà nke Setan. Kọwaara anyị Oziọma ahụ ka okwu gị wee doo anyị nsọ n'ezie, anyị nwekwara ike ibi ndụ kwekọrọ n'ihe anyị na-ekwusa.
Olee otú Jizọs si gwa Nna ya ka ọ ghara ime ihe ọjọọ?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)